မိန္းကေလးမ်ားသတိထားၾကဖို႔။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ေလးကတကယ့္အျဖစ္အပ်က္ေလးပါ - 9style
TjrxgWfzULaCgCdvDE November 15, 2018
မိန္းကေလးမ်ားသတိထားၾကဖို႔။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ေလးကတကယ့္အျဖစ္အပ်က္ေလးပါ 2
မိန်းကလေးများ လုံးဝ သတိထားကြဖို့။ (တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ)
ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာအလကားရတယ်ဆိုတာ ခပ်ရှားရှားရယ်..မနှစ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ ့ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပါ
ကောင်မလေးကကျောင်းသူတစ်ဦးပါ နယ်ကနေလာပြီးဘန်ကောက် မြို ့ပေါ်မှာကျောင်းလာတက်ရင်းနဲ ့Online ပေါ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်နဲ ့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..နောက်တော့ချစ်သူအမေရိကန်ိန်င်ငံသားက
ဘန်ကောက်ကိုအလည်ရောက်လာပါတယ်..အတူသွားအတူအတူတူနေပြီးသိပ်မကြာခင်မှာဘဲ ဗီဇာသက်တန်းကုန်တော့အမေရိကားကိုပြန်ရတော့မှာမို ့ကောင်
မလေးက မပြန်ခင်သူမကို တရားရုုံးမှာ ဇနီးမယားအဖြစ်လက်မှတ်ထိုးသွားပါလို ့တောင်းဆိုတော့ ကောင်လေးက သူလက်မှတ် မထိုးပေးနိုင်ပါဘူးတဲ ့သူ ့မှာဇနီးရှိ
ပါတယ် လို ့ပြောတော့ကောင်မလေးက နင်ငါ့ကိုတရားရုံးမှာ လက်မှတ်မထိုးပေးဘူးဆိုရင် အခုချက်ချင်းရဲ ကိုကြောင်းကြားပြီး ငါ့ကိုမတရားစော်ကားပါတယ်ဆိုပြီး တိုင်မယ်ပြောတော့ အဲ ့ဒီနိ်ုင်ငံခြားသားလဲ ကြောက်လို ့နှူတ်ပိတ်တဲ ့အနေနဲ ့သတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်..
မမြောဘဲနဲ ့ဒီအတိုင်းကျန်နေနေတာပေါ့ နောက်နေ ့အမှိုက်တွေ လိုက်ကောက်တဲ ့သူကအလောင်းကိုတွေ ့တော့ ရဲကိုအကြောင်းကြားပြီးရဲကအမှူစ်တော့ကောင်မလေးနေခဲ့တဲ တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုမေးတာ ကောင်မလေးဆီကို နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်အမြဲလာကြောင်း သက်သေအနေနဲ့တိုက်ခန်းရဲ ့လူသွားတဲ ့စင်္ကြန်တိုင်းမှာဗွီဒီယိုကင်မရာတပ်ထားတော့လူသတ်ရားခံကို လွယ်လွယ်နဲ ့ပဲ ပြန်ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်..
မိန်းကလေးများသတိထားကြဖို့။ ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကတကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ 2
ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ ့လေ့လာရေးခရီး၃ ရက်လောက်သွားချင်တယ်ဆိုပြီးမိဘတွေဆီမှာခွင့်တောင်းပါတယ် မိဘတွေကလည်းကျောင်းနေဘက်သူငယ်ချင်းတွေနဲ ့သွားမယ်ထင်ပြီး ကြည်ကြည်ဖြူဖြူပဲ ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်..နောက်၃ ရက်လောက်ကြာတော့ သမီးဖြစ်တဲ ့သူအိမ်ကိုပြန်မရောက်သေးလို့ကျောင်းနေဘက်သူငယ်ချင်းတွေဆီလိုက်မေးတာ
သူငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးတစ်ယောက်မှ လေ့လာရေးခရီးမသွားရပါဘူးတဲ့…ဒါဆိုရင်ဘယ်သူနဲ ့သွားတယ်ဆိုတာသိကြလားဘို ့မေးတော့ တိတိကျကျတော့မသိပါ
ဘူး Online ပေါ်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ ့ပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့Online ပေါ်ကသူငယ်ချင်းတွေ ဘယ်မြို ့ဘယ်ရွာကလဲဆိုတာ မိဘတွေရော ငယ်သူငယ်ချင်းတွေေ
ရာ တစ်ယောက်မှ မသိကြပါဘူး အဲဒါနဲ ့မိဘတွေကTV ကနေတဆင့် ဓါတ်ပုံနဲ ့တကွ လူပျောက်ကြော်ငြာ တင်ပါတယ်..သူတို ့ရဲ ့သမီးလေး Online ပေါ်က
ခင်တဲ ့သူငယ်ချင်းနဲ ့လေ့လာရေးခရီး၃ ရက်သွားတာ ယခုအချိန်ထိ အိမ်ပြန်မရောက်သေးကြောင်း..တွေ ့ရှိက အကြောင်းကြားပါရန် ဆိုပြီး TV ကနေလွှင့်ပေးပါတယ် ဒါပေမယ့် ယခုအချိန်ထိ ကောင်မလေး အိမ်ပြန်မရောက်ခဲ့ပါဘူး သေလားရှင်လားတောင်မသိခဲ့ရပါဘူး.
ကဲ သူငယ်ချင်းတို ့ရေ..ဒီအဖြစ်အပျက်လေး၂ ခု ကိုကြည့်ပြီးတို ့တွေ သုံးသပ်ရအောင်နော်..
Online ပေါ်မှာက လူပေါင်းစုံ မို့လူ ကောင်းလားလူလိမ်လားဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူး လူကောင်းတွေရှိသလို ရုပ်လေးဗန်းပြပြီး မဟုတ်တာ လုပ်နေတဲ့လူလိမ်တွေလဲ ရှိပါတယ်…
တစ်ချို ့က ချမ်းချမ်းကို ဝေဖန်အပြစ်တင်ကြပါတယ်.အွန်လိုင်းပေါ်က လူတွေကို မယုံကြည်တာဟာ သဘောထား သေးသိမ်တာပဲတဲ့..
အင်း ငါ့အကြောင်း သူမသိသေးလို့ငါ့ကိုအယုံအကြည်မရှိတာပဲ..သူမမှားပါဘူး.တစ်နေ ့ငါ့အကြောင်းသိရင်တော့ ငါ့ကိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီး ဒီလိုပဲ ခံယူ
ထားတယ်..အကြောင်းမသိတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို လွယ်လွယ် လေးယုံကြည့်လိုက်တာထက်သေချာလေ့လာပြီးမှ ယုံကြည်သင့်ပါတယ်..ချမ်းချမ်း စာအုပ်တစ်အုပ်မှာဖတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာမိမိရဲ ့တန်ဖိုးဘဝသိက္ခာနဲ ့ပက်သက်လာရင်အားမနာတတ်တာအကောင်းဆုံးပါ တဲ ့.အရာရာကို အသိလေးနဲ ့စဉ်းစာဆင်ခြင်ပြီးချင့်ယုံပါလို ့ဆန္ဒပြုလျှက်
လူၾကမ္းသရုပ္ေဆာင္ၾကီး ကိုအံ႔ေက်ာ္ရဲ႕ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္း
မိဘ႐ွာ​ေကြၽး​ေနတဲ့ သားဖြားဆရာမ​ေလးကုိ ကယ္​ၾကပါဦး႐ွင္​.. တရား႐ုံး ႐ုံးခ်ိန္​းလာတာေဆးျပားကုိ ယူလာပါ့မလား႐ွင္
အမ်ိဳးသမီးအႏုပညာရွင္အခ်ိဳ႕၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီ ဒဲ့ပဲေျပာ လိုက္တဲ့ လင္းဇာနည္ေဇာ္ !!!
Victoria အမႈ တရားခံဟု ရံုးတင္စြပ္စြဲခံထားရတဲ့ ယာဥ္ေမာင္း ေအာင္ႀကီးအတြက္ အကိုျဖစ္သူ၏ေပါက္ကြဲသံ